Sage Bionetworks Co-Muvambi Matimu Kumusoro NaApple Kugadzira Nyowani Hutano Hwezvirongwa IPhone nhau
Sage Bionetworks co-muvambi anokwikwidza pamwe neApple kugadzira mapurojekiti matsva ekuchengetedza hutano
Kubva kuvhurwa kweApple Watch, Apple yakaratidza kuti ine kufarira kwakanyanya mukugadzira smartwatch yayo chishandiso chinotibatsira zuva nezuva kunatsiridza zvese chiitiko chedu chemuviri uye kuve nemaporesi edu, kurova kwemoyo kunodzorwa nguva dzese, nezvimwe. Asi haisi kungotungamira hutano kuApple Watch, asi iri kutarisa zvakare paKechnKit, iyo Apple iri kugadzira hurongwa hunobvumidza masangano ekurapa kuti ave nehutano hwevarwere hunodzorwa nguva dzese uye izvi zvakasaina Dr. Stephen Friend, mumwe wevakabatana veSage Bionetworks, kambani ine hunyanzvi mukutsvagisa biomedical kuburikidza nekushandisa kwemakomputa modhi kufanotaura mhedzisiro uye mhedzisiro yekurapwa.
Zvinoenderana neshoko raakatumira pane yake webhusaiti:
Dr. Friend vabvuma kubatana nekambani yeApple kwaanozoshanda pazvirongwa zvine chekuita nezvehutano.
Iyo kambani yaive imwe yemakambani ekutanga kubatana neKutsvaga Kit, chirongwa chakatangwa neApple munaKurume 2015 kusvika mhanyisa kufambira mberi kwekurapa mukutsvaga kurapwa. Pakutanga, Dr. Shamwari akashanda achitungamira oncology yesainzi timu yekutsvaga paMerck & Co mukuwedzera pakushanda kuHarvard Medical School.
Zvizhinji zvekufambira mberi zvakaitwa naSage pamusoro pemakore zvakabatana naDr Friend saka kubva zvino zvichienda mberi achashanda pamwe nekambani pasina kusiya basa rake uye zvidzidzo mukambani yaakavamba. Ngatione kana rimwe zuva tichizonakidzwa nesoftware yese iri kugadzirwa nekambani yeCupertino kune nyika yehutano, nekuti zvaizobvumidza nenzira inoshanda kwazvo yekuongorora zvirwere zvinogona kuitika pasina chikonzero chekuti vashandisi vanofanirwa enda kunzvimbo dzekurapa, kunze kwekunge paitika njodzi dzinotyisidzira hupenyu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Sage Bionetworks co-muvambi anokwikwidza pamwe neApple kugadzira mapurojekiti matsva ekuchengetedza hutano
MicroLED skrini inogona kusvika kuchizvarwa chechitatu cheApple Watch
Twitter ichawedzera zvitambi mumavhiki anotevera